Eyona meko iphambili ye-iphone 6 engenawo amanzi kunye namanzi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Eyona meko iphambili ye-iPhone 6 engenawo amanzi kunye namanzi
Eyona meko iphambili ye-iPhone 6 engenawo amanzi kunye namanzi
Amanzi. Ibaluleke kakhulu kuzo zonke izinto eziphilayo kulo mhlaba, kodwa iyabulala kuzo zonke izixhobo ze-elektroniki ezingqonge thina, kubandakanya ii-iPhones zethu. Kwaye ngelixa thina & apos; ngekhe siyifumane indlela yokuphila ngaphandle kwamanzi, ubukrelekrele bomntu sele bujongane nengxaki yokukhusela izixhobo zethu kwimpembelelo eyonakalisayo yamanzi. Dibana nembonakalo yemibala yeemeko ezingangeni manzi nezamanzi ezingenzelwanga ukonyusa ubungqongqo be-iPhone 6 yakho ebukekayo, kodwa ecekeceke ngokugqithileyo.
Into esilungiselele yona apha ngezantsi lukhetho lwezona meko zintle zokungena manzi ze-iPhone 6 ezikhoyo kwintengiso. Ezinye zazo zikwazisa nezinye izinto ezinokubakho, ezinje ngokuxinana ngokupheleleyo kwezemidlalo nothuli olusebenzayo kunye nokukhuselwa kukothuka, kodwa besingengabo ngokwenene ekuzingeleni iimeko ezinzima kakhulu, ezinje ngezixhobo ezinokukhusela i-iPhone yakho kuyo nantoni na entle . Endaweni yoko, sikhethe ngononophelo ngesandla kuphela ezo meko zokumelana namanzi ezingazukuphendulela i-iPhone 6 yakho entle kwisitena esityebileyo, esibi. Apha, zijonge!
Inja kunye neBone Wetsuit
Ixabiso: $ 79.95: Thenga apha IP IP 68: MIL-STD 810F
Inja kunye neThambo leWetsuit ye-6 ityala elingena manzi lisichukumisile ngomxube wenkangeleko entle kunye nenqanaba lokuqina. Ityala alizi kuphela ngesiqinisekiso se-IP 68 (ukungabi nalo uthuli, ukuntywiliselwa ngaphaya kwe-1 m), kodwa ikwagubungela imigangatho ye-MIL STD 810F, ithiyori ivumela ukwehla ukusuka kwi-6.6 yeenyawo (2 yeemitha). IWetsuit iza ngeendlela ezintathu ezahlukileyo zombala: orenji, mnyama, nomhlophe.
Isupcase ye-iPhone 6
Ixabiso: $ 24.99: Thenga apha
Ngoku, i-Supcase ye-iPhone 6 yimodeli enomdla kakhulu, kwaye ngexabiso elilingayo, nayo! I-Wetsuit, nangona kunjalo, ihlala kwindawo yoxhathiso lwamanzi, ke iiapos azinakho ukungena manzi ngokupheleleyo. Ngelixa ngesiqhelo isixhobo sakho siza kulondolozwa kukutshizwa kunye nemvula, ngekhe senze lukhulu ngokuchasene nokuntywiliselwa ngokupheleleyo emanzini. Endaweni yoko, i-Supcase ithembisa ukufunxa ezo mpembelelo zibi ukuba yonke ifowuni ekugqibeleni idlule kube kanye ngexeshana. Ukongeza, iyazama nokunyusa umdlalo kwisebe lesitayile. Ayisiyonto inzima kuphela kwaye inesikhuseli esakhelweyo esakhelwe ngaphakathi, kwaye ikwabandakanya iipleyiti zangasemva ezintathu ezinemibala eyahlukeneyo: umpu, isilivere kunye negolide.
INew Trentium 6S entsha
Ixabiso: $ 21.95: Thenga apha
I-Trentium 6S yi-New Trent yenye ye-iPhone 6 ekhangeleka kakuhle eya kukhusela i-smartphone yakho kumonakalo wamanzi. I-Trentium 6S eyakhelwe ngaphakathi ngombono wokuba mncinci kunabalingane bayo, iyacetyiswa ngabasebenzisi abonwabileyo ngenqanaba lokuthuthuzela nokubonakala kwayo okunomtsalane, ukongeza malunga ne-3 mm kwiprofayili ye-iPhone 6. Ukuchukumisa okuhle kukuba, ngokufanayo Isupcase, iipleyiti zangasemva ziyatshintsha, kunye neTrentium 6S nayo ibuye ihlanganiswe ngamacwecwe amathathu anemibala eyahlukeneyo onokukhetha kuyo: igolide, mnyama, kunye grey. Nangona kunjalo, njengomvelisi iNew Trent ayenzi kwaye ayiniki datha malunga naso nasiphi na isatifikethi esithile soburhabaxa, asizukuba madolw 'anzima ukuyilahla ifowuni echibini lamanzi. Ukuqhekeka okungacwangciswanga kunye nokuhla kuya kuba kulungile, nangona kunjalo.
Ixabiso: 79.99: Thenga apha IP IP 68: MIL-STD 810G-516.6
Ityala le-LifeProof simahla le-iPhone 6 liphakathi kweyona nto idume kakhulu xa kufikwa kumatyala e-premium angenamanzi e-Apple kunye neapos. Iindaba ezimnandi zezokuba ii-apos ayisiyokungena kwamanzi kuphela, kodwa kunye nokungcola, ikhephu, kunye nobungqina bothusayo ngokunjalo. Gqibezela indawo encinci ebonakalayo emqolo ukuze ubonise iiapos; uphawu lweapile yeApple, 'njengoko i-LifeProof isitsho, iiFree & Apos; azibonakali ngathi zinomtsalane ngokubonakalayo njengenye yeminye iminikelo esiyikhethileyo, kodwa yona Ngokuqinisekileyo ungaphezulu kokukwazi ukubonelela ngokhuseleko olufunekayo ngaphandle kokongeza isixa esikhulu kwifowuni yakho.
Ixabiso: $ 99.95: Cwangcisa kwangaphambili apha IP IP 68: MIL-STD 810G
Imveliso ezayo ekufuneka siyikhankanyile yiLunatik Aquatik- ityala elingena manzi kunye nothuli elingena-vidiyo le-6 elibukeka licekeceke kwaye linesitayile. Ngokuqaqamba kombala kunye noncedo lweempawu ezikumgangatho ophezulu ezinje ngeCorning kunye neeapos zeGorilla yeGlasi kunye neembrane ze-hydrophobic, iLunatik Aquatik iyinyani njengenye yezona meko zinkulu zepremiyamu ye-iPhone 6 (ichaza ixabiso layo elixhomileyo) . Eyona nto ibalaseleyo, inkampani ithembisa ngemibala eyahlukeneyo, kubandakanya iorenji, mnyama, pinki, nomhlophe. I-Aquatik kufuneka ifumaneke ngamanye amaxesha ngo-Epreli.
Ibhonasi: Ukhe wayiqwalasela iLiquipel?
Ukuba la macala e-chubby angaphezulu kwaye ayisiyiyo indebe yakho, kodwa ngaxeshanye, awukuthandi ukuba nezinto zokukhusela amanzi kwifowuni yakho, inkonzo efana neLiquipel inokuba yile nto uyifunayo. . I-Liquipel inokufaka isicelo sokuthintela amanzi ngokunganyangekiyo kwifowuni nakwizinto zayo zangaphakathi, ngaphandle kokuyidibanisa. Inkampani ithembisa ukuphatha isixhobo sakho ngononophelo, nangona wena & ampos; kusaza kufuneka uhambe kubunzima bokuhambisa i-smartphone yakho kwiiofisi zazo zenkqubo. Emva kokuba ubuyile kwakhona exabisekileyo, ayisayi kuphumelela ukuba ingangeni manzi ngokupheleleyo, kodwa iya kukwazi ukumelana nokudibana okungacwangciswanga kunye nenxalenye yamanzi. Ngendlela, inkonzo ayikhethi kuphela kwi-iPhone 6-yona kunye neapos ikwakhona kuluhlu lwezinye ii-smartphones ezithandwayo, kubandakanya uninzi lwee-Android.
Ingubo yeLiquipel nano
ixesha elingakanani ukufundela
I-Samsung Galaxy Note Edge vs Samsung Galaxy Qaphela 4
Imihla yokukhutshwa kweGoogle & apos; s iPixel 5 kunye nePixel 4a (5G) inokuba ibhalwe ilitye
Nantsi indlela yokwenza inkxaso yeAdobe Flash kwi-Android 4.4 KitKat
Uyisebenzisa njani i-CURL ukuthumela izicelo ze-API
I-Samsung Galaxy S21 Ultra kunye ne-Galaxy S20 Ultra 5G
Ingxelo ithi ukwaziswa kweeBeats Studio Buds kusondele
Isamsung ibulala umncedisi wayo wokuqala welizwi, ilungiselela iGear S3 kunye nohlaziyo lweMidlalo yeGear
U-Spotify ufuna ukujonga indawo okuyo 'amaxesha ngamaxesha', evakalelwa ngokungafunekiyo kwaphela
Inqaku lempilo le-iOS 13.5 linokuba ngumahluko phakathi kobomi nokufa
Cloud vs SSD yangaphandle / HDD yokugcina: Yeyiphi oyikhethayo ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho